9 Deeq waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah 2022
Waxaa jira in kabadan toban daraasadood oo fiqiga ah ee Kanada ardayda caalamiga ah. Maaddaama barnaamijku uusan ahayn mid caan ah, fursadaha gargaarka lacageed ee loo fidiyaa aad bay u yar yihiin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan at Study Abroad Nations go'aansaday in la abuuro boostadan si looga caawiyo dadka xiiseynaya barashada fiqi ahaaneed inay bartaan fursadaha deeqaha waxbarasho ee jira iyo fududeynta gelitaankooda.
Kanada waa mid ka mid ah saddexda xarumood ee ugu sarreeya adduunka oo leh tirada ugu badan ee ardayda caalamiga ah. Sannadle, waddankan wuxuu albaabadiisa u furaa inuu ku soo dhoweeyo ardayda meel kasta oo ay dunida ka joogaan si loogu amro waxbarashadeeda tayada leh.
Hay'adaha sare ee Kanadiyaanka ayaa caan ku ah bixinta barnaamijyada caanka ah ee cilmiga sayniska, farshaxanka, iyo cilmiga ganacsiga. Maaddaama hey'adaha sare ee Kanada ay ku leeyihiin maadooyinkan, dad badan ayaa halkaas ku soo qulqulaya sannad kasta si ay uga qayb qaataan.
Fiqigu waa edbinta cilmiga farshaxanka wuxuuna xiriir la leeyahay diinta masiixiga. Kuwa daneynaya inay noqdaan hogaamiyeyaasha kaniisadaha waa inay qaataan barnaamijkan si ay u fahmaan caqiidada Masiixiyiinta.
"Fiqigu waa edeb tacliimeed oo si nidaamsan u darsa dabeecadda rabbaaniga ah, iyo guud ahaan, aaminaad diimeed" _source - Wikipedia
Erayada fudud, fiqigu waa barashada dabeecadda Eebbe iyo caqiidooyinka diinta. Waxaa lagu baraa anshax tacliimeed jaamacadaha iyo siminaaro.
Qaar ka mid ah jaamacadaha Kanada waxay bixiyaan barnaamijyo noocan oo kale ah haddii aad rabto inaad wax ka barato jaamacad sidoo kale waxaa jira deeqo waxbarasho oo diyaar u ah inay ka caawiso waxbarashadaada.
Deeqdani waxay u fidsan tahay ardayda doonaya inay bartaan fiqiga ama jaamacad ama seminar, waxa kaliya ee ay tahay waa inaad noqotaa arday caalami ah oo Kanada ah.
Deeqaha waxaa bixiya kaniisadaha, aasaaska sadaqada, iyo ururada, iyo hay'adaha kale ee Masiixiyiinta ah. Tani waa in lagu dhiirrigeliyo dad badan inay yimaadaan goobta oo ay ka dhigaan fiqiga mid caan ah sida qaybaha kale ee waxbarashada.
Maxaan Ku Qaban Karaa Shahaadada Fiqiga?
Deeqaha Jaamacadaha ee King iyo Bursaries
Deeqaha Shahaadada Ontario (OGS)
Kaalmada maaliyadeed ee VST
Deeq waxbarasho oo buuxda
Bixinta deeqda waxbarasho ee Machadka Baybalka ee Elim iyo Kulliyadda
Dr. Thomas L Marberry Deeqda Wasaaradda Christian
Deeqaha Jaamacada Belmont
Deeqaha Kuleejka ee Axdiga iyo Gargaarka
Deeqaha Jaamacadda Heritage
Dadka badankood dhab ahaan ma yaqaanaan waxa lagu sameeyo shahaadada fiqiga maadaama aysan caan ahayn. Ma eedeynayo dadka aan waxba ka ogeyn arrintan, laakiin, waa tan waxa aad ku sameyn karto shahaadada Bachelor-ka ee fiqiga…
Wadaadka Katooliga ama wadaadka
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku sameyso laba-fal weyn fiqiga oo aad ku dabaqdo wixii aad soo baratay cilmiga kale sida cilmu-nafsiga, sharciga, ganacsiga, kalkaalinta, iyo goob kale.
Tani way kugu filan tahay inaad fahanto waxa fiqiga ku saabsan iyo maadaama ay tahay dareenkaaga waa inaad horeyba u laheyd fahamka goobta.
Anaga oo aan la sii ambo qaadin, haddaba aan ku quusno mawduuca ugu muhiimsan ee xitaa muhiimadda weyn leh. Deeqdani waxay kaa caawin kartaa inaad waxbarto oo aad kasbato shahaadada fiqiga adigoon bixin dime waxaadna u baran doontaa koorsada sidii arday caalami ah oo Kanada ah.
Hoos waxaa ku yaal liis isku dhafan oo ah deeqaha fiqiga ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, oo si dhow ula socda faahfaahintooda oo ay ku jiraan sida shakhsiyaadka xiisaha leh u dalban karaan deeqda waxbarasho ee ay doortaan. Deeqdan waxbarasho ayaa kala ah;
Dr Thomas L Marberry Deeqda Wasaaradda Christian
Jaamacadda King waa aqal sare oo sharaf leh oo ku yaal Edmonton, Alberta, Kanada. Jaamacaddu waxay bixisaa illaa saddex deeq waxbarasho oo kala duwan iyo deeqo gaar ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku bartaan cilmiga fiqi ahaanta.
Deeqdan waxbarasho iyo deeqaha waxbarasho ayaa kala ah;
Gunnada Adeegga Masiixiyiinta: Bixintaani, oo leh qiimo ah $ 2,250, ayaa la siiyaa sanadkiiba afar arday oo waqti-buuxa ah oo soo gala oo ku qoran barnaamijka shahaadada ee fiqiga. Si aad xaq ugu yeelatid, ardaydu waa inay haystaan ​​ugu yaraan darajo dhan 1.7 GPA, oo muujiyaan baahi dhaqaale, soo bandhigaan bayaannada ballanqaadka masiixiga, iyo ugu dambeyn warqad tixraac ah oo uga socota wadaadkooda.
Deeqda Knoppers-Boon: Tani waa $ 1,500 oo qiimo leh oo deeq waxbarasho ah oo ay heli karto haweeney soo laabaneysa si ay u dhameystirto waxbarashadeeda fiqiga. Shuruudaha u-qalmitaanka waxaa ka mid ah dayactirka GPA ee 3.3, waxqabadka akadeemiyadeed ee wanaagsan, iyo muujinta ujeedo xirfadeed iyo u heellanaan Christian.
Deeqda Reta Haarsma: Tani waa $ 1,000 deeq waxbarasho oo sannadle ah oo la siiyo afar arday oo waqti-buuxa ah oo ka diiwaangashan barnaamijka shahaadada Bachelor of Arts oo leh maaddada ugu weyn ama fiqiga. Shuruudaha waxaa ka mid ah GPA ee 3.3, gaaritaanka heerka tacliimeed ee muuqda, iyo muujinta ka go'naanta masiixiga.
Saddexda kaaliye dhaqaale ee kor ku xusan waxaa bixiya Jaamacadda King waxayna u dhaaftaa mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee Kanada ee ardayda caalamiga ah.
Waxa kale oo jira deeqo kale oo badan oo jaamacaddu siiso ardayda caalamiga ah si ay u bartaan barnaamij kasta oo ay doortaan. Waxaad u isticmaali kartaa deeqdan waxbarasho inaad ku barato fiqiga Jaamacadda King maadaama ay tahay barnaamij kasta oo aad dooratid.
Soo Celinta Deeqda Ardayda - Heer Sare: deeqdan waxbarasho ee ah $ 2,000 waxaa la siiyaa ardayda ku soo laabanaya King ee galaya sannadkoodii labaad, saddexaad ama afraad. Si aad xaq ugu yeelatid, ardaydu waa inay haystaan ​​GPA inta udhaxeysa 3.80 - 4.00 ayna dhameystiraan ugu yaraan 18 dhibco.
Ardaydu waa inay ka gudbeen koorsooyinkoo dhan, oo ay kujiraan koorsada Aragti Dhexdhexaad ah, sanad dugsiyeedkii hore. Ardaydu waa inay iska diiwaangeliyaan 12 buundooyin xilli dugsiyeedkiiba sanadka soo socda, la kulanka dhammaan shuruudahaan ayaa kaa kasbanaya deeqdan waxbarasho.
Soo Celinta Deeqda Ardayda - Maamuus: deeqdani waxay sidoo kale u tahay ardayda ku soo noqonaysa GPA inta udhaxeysa 3.50-3.79. Shuruudaha u-qalmitaanka ee deeqdani waxay la mid yihiin kuwa kor ku xusan. Qiimaha waa $ 1,000.
Deeqda waxbarasho ee gelitaanka Jaamacadda King - heer sare: Tani waa deeq waxbarasho oo qiimaheedu yahay $ 3,000 oo la siiyay ardayda imanaya King's markii ugu horeysay. Qaatayaashu waa inay iska diiwaangeliyaan ugu yaraan 1 dhibic xilli-dugsiyeedkiiba inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka si ay u ilaashadaan deeqdooda waxbarasho. Ardayda celceliska gelitaanka 90% - 100% ayaa u qalmi doona deeqda waxbarasho.
Marka, kuwani waa saddexda guud ee deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah oo ay si siman ugu isticmaali karaan barashada fiqiga ee Jaamacadda King.
Sida magaca deeqda waxbarasho, deeqaha waxbarasho waxaa loogu talagalay oo keliya ardayda qalin jabisa. Marka, haddii aad tahay arday caalami ah oo doonaya inuu sameeyo sayidkooda ama dhaqtarka cilmiga fiqiga waa inaad ku boodaa midig deeqdan waxbarasho. OGS si gaar ah looguma talogelin fiqiga, waa mid ka mid ah deeqaha guud ee ay bixiso Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah inay ka amar qaataan.
Tani waxay ka dhigeysaa deeqda waxbarasho ee OGS mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee Kanada ee ardayda caalamiga ah. Codsi ayaa looga baahan yahay deeqda waxbarasho waana inaad ku dalbataa jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay. Waqtiga kama dambaysta ah, shuruudaha u-qalmitaanka, iyo macluumaadka dalabka way ku kala duwan yihiin hay'adda waa inaad la xiriirtaa jaamacadda aad martida u tahay faahfaahintaas.
Iskuulka fiqiga ee Vancouver (VST) wuxuu bixiyaa noocyo deeqo waxbarasho, deeqo, iyo deeqo ah ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan cilmiga fiqiga ee jaamacada. Kaalmo lacageed ayaa la siiyaa si ay u caawiso ardayda una caawiso hoos u dhigida qiimaha waxbarashada.
Deeqdani waxay u baahan tahay codsi waana inaad ka diiwaangashan tahay barnaamij, sida fiqiga, dugsiga ka hor intaadan codsan deeqda waxbarasho. Iyada oo qayb ka ah arjiga deeqda waxbarasho, ardaydu waa inay soo gudbiyaan codsi faahfaahsan oo ku saabsan miisaaniyaddooda, iyo faahfaahinta kale ee dheeriga ah ee looga baahan doono dugsiga.
Sidoo kale, ardayda muujiya baahida dhaqaale waxay heli doonaan deeqo dhan ilaa 50% tani waxay ka dhigeysaa VST Gargaarka Maaliyadeed mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee Kanada ee ardayda caalamiga ah.
Deeqda waxbarasho ee buuxda ee loo yaqaan 'Torch-Torch Scholarship' waa mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee ay bixiso Kulliyadda Dhexe ee Kitaabka Qudduuska ah. Deeqdani waa mid lagu xalin karo kuleejka waxaana la siiyaa ardayda dhowaan la aqbalay ee muujiya waxqabadka tacliinta sare.
Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, codsadaha waa in loo ogolaadaa inuu yahay arday waqti-buuxa ah oo u taga Bartamaha si uu u sii wato shahaadada koowaad ee bachelorka oo waxaad dooran kartaa fiqiga. Dhibcaha ugu yar ee ACT ee 22 iyo GPA ee 4.0 waa shuruudo kale oo ay tahay inay ardaydu buuxiyaan si ay ugu guuleystaan ​​deeqda waxbarasho.
Machadka Kitaabka Quduuska ah ee Elim iyo Kulliyadda (EBIC) wuxuu siinayaa deeq waxbarasho oo gaareysa $ 8,440 kaliya dadka degan Mareykanka, taas oo ah, muwaadiniinta Mareykanka iyo deganayaasha joogtada ah. Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay dhammaystiraan codsigooda gelitaanka buuxa ee EIBC. Codsadeyaashu waa inay sidoo kale haystaan ​​ugu yaraan dugsi sare ama kulliyad GPA oo ah 2.5 si loogu tixgeliyo sawirka deeqda waxbarasho.
Kani waa mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee Kanada lagu bixiyo oo keliya jaamacadda Randall, oo ah jaamacad lagu tababaro wasiirrada iyo adeegayaasha. Deeqdani waa mid si buuxda loo maalgeliyey waxayna daboolaysaa waxbarashada ardayga waxayna u dhigantaa $ 40,000.
Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, codsadayaashu waa inay ka diiwaangashan yihiin Iskuulka Wasaaradda Masiixiyiinta ee Jaamacadda Randall iyo markii codsaduhu helo deeqda waxbarasho, waa inay haystaan ​​ugu yaraan GPA ee 2.75 waana inay ku sii wadaan dugsiga.
Jaamacadda Belmont waxay leedahay deeq waxbarasho oo isdaba-joog ah oo aad dalban karto si aad ugu barato fiqiga Kanada sida caalami ah oo aan dhib lahayn. Waxaa jira kaalmada deeqda waxbarasho ee mudnaanta leh, deeqaha waxbarasho guud ee mudnaanta, loo yaqaan deeqaha waxbarasho, iyo deeqo waxbarasho oo kale oo waaxeed ah.
Mudnaanta iyo deeqaha waxbarasho ee guud ayaa runtii loogu talagalay dhammaan barnaamijyada shahaadada koowaad, sidaa darteed waad u isticmaali kartaa deeqda waxbarasho si aad ugu barato fiqiga jaamacadda. Deeqaha waxbarasho uma baahna ardayda inay codsadaan iyaga, arjigaaga gelitaanka waxaa loo isticmaalaa in dib loogu eego ardayda loona xusho kuwa guuleysta.
Qeybta deeqda waxbarasho ee waaxda, waxaa jira laba deeq waxbarasho gaar ahaan ardayda fiqiga ah ama ardayda doonaya inay galaan waqti buuxa. Deeqdan waxbarasho ee waaxda ah waxaa bixiya Kuliyadda fiqiga ee Belmont iyo Wasaaradda Masiixiyiinta oo labo ayaa ka mid ah.
The Thomas J. Madden Deeqda waxbarasho waa deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay nin Masiixi ah oo cusub oo ku takhasusay diinta wuxuuna doonayaa inuu galo wasaaradda waqtiga buuxa. Waxaa jira deeqda waxbarasho ee labaad ee loo yaqaan 'Serbian Leader Leader Scholarship' waxayna la mid tahay tii hore marka laga reebo in la siiyo haweeney.
Cilmiga fiqiga badanaa wuxuu ku saabsan yahay barashada caqiidada Masiixiga iyo kobcinta sidoo kale, kulleejadani waxay gooni u dhigtay noocyo kala duwan oo deeqo waxbarasho, deeqo ah, iyo kaalmooyin kale oo maaliyadeed ah si ay uga caawiso horumarinta iimaankaaga inaad ka walwasho waxbarashada. Deeqaha Kuleejka ee Deeqaha iyo Gargaarka ayaa loo gudbiyaa mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee Kanada ee ardayda caalamiga ah.
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo kaladuwan oo laga heli karo kulleejdan oo ay ardaydu gacmahooda ku heli karaan, deeqaha waxbarasho ayaa kala ah;
Ma jiro codsi gooni ah oo loogu talagalay deeqdan waxbarasho waxayna ku saleysan tahay dalabkaaga gelitaanka kulliyadda. Deeqaha waxbarasho ee ka hooseeya qaybtan ayaa ah;
Deeqda Wakiilka ee lagu qiimeeyay $ 20,000
Deeqda aasaasiga ah ee lagu qiimeeyay $ 18,000
Deeqda-waxbarasho ee Tower oo u dhiganta $ 16,000
Deeqda waxbarasho ee loo yaqaan 'Thistle Scholarship' oo lagu qiimeeyay $ 14,000
Shield Scholarship oo u dhiganta $ 12,000
Deeqda waxbarasho ee Tartan oo u dhiganta $ 10,000
Tani sidoo kale waa markii ugu horreysay, ardayda shahaadada-doonka ah waxayna u baahan tahay codsiyo gooni ah. Deeqaha waxbarasho ee qaybtan waa;
Barnaamijka Aqoonyahanada Maclellan
Deeqaha waxbarasho ee Wilberforce - $ 15,000
Deeqaha Madaxweynaha - $ 5,000
Kuwani waa caawimaadda maaliyadeed ee ay bixiso Kuliyadda Axdiga iyo ardayda doonaya inay ku bartaan cilmiga fiqiga ee iskuulka ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara deeqaha waxbarasho. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad ka codsato koleejka barnaamijka fiqiga oo hadaad haysato diiwaanada akadeemiyadeed ee wanaagsan waxaad ku guuleysan kartaa mid ka mid ah mudnaanta deeqaha waxbarasho.
Jaamacadda Heritage waxay siisaa mid ka mid ah deeqaha fiqiga ee ugu sarreeya Kanada ardayda caalamiga ah oo daboolaysa waxbarashada Bachelor of Arts ama mid ka mid ah saddexda darajo ee fiqi ahaaneed (Master of Arts, Master of Wasaaradda, iyo Master of Divinity).
Cilmiga fiqiga waa barnaamij ku jira Bachelor of Arts, codso deeqdan waxbarasho oo waxaad u dooratay Theology sida edbintaada maadaama ay weli tahay Fanka.
Kuwani waa deeqaha fiqiga ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, halka qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee halkan laga heli karaa loogu talagalay barnaamijyada guud sidoo kale waxay u shaqeeyaan ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku bartaan fiqiga Kanada.
Shuruudaha deeqaha waxbarasho way kala duwan yihiin iyaga oo si taxaddar leh u maraya iyaga oo la xiriiraya hay'adda martida loo yahay si aad wax badan uga ogaatid shuruudaha u-qalmitaanka ama shuruudaha ay dejiyeen ee aan halkan ku qorneyn. Ujeeddooyinka gelitaanka, waxaad u baahan tahay inaad gasho bogga "gelitaanka" ee dugsiyada oo aad hesho macluumaadka aad u baahan karto.
Sidoo kale waa inaad ogaataa inaad tahay arday caalami ah inaad u baahan tahay inaad haysato fiisada ardaygaaga Kanada ama waddan kale oo ajnabi ah.
Hoos waxaa ku yaal deeqo waxbarasho oo kale oo laga yaabo inaad xiiseyneyso inaad fiiriso;
10 Deeqaha Dawlada ee Dibedda Lagu Barto Iyadoo Codsi Bilaash ah
10 Goobood Si Aad Uga Hesho Shahaadooyin Iskuxira Khadka Tooska ah
Deeqaha Canadianka Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
deeqaha fiqiga ee Kanada ardayda caalamiga ah
Previous Post:Koorsooyin Jaamacadeed Online oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyinka Ardayda
Post Next:15 Shahaadooyinka Degdegga ah ee Ugu Fiican ee Si Fiican u Bixiya
Kassahu Elias wuxuu leeyahay,
May 2, 2022 at 1: 55 pm
Pingback: 250+ Su'aalaha iyo Jawaabaha Kitaabka Quduuska ah ee adag ee 2021
Oladimeji Ibitoye wuxuu leeyahay,
October 11, 2021 at 6: 21 pm
Waxaan xiiseynayaa in sayidkaygu ku haysto barashada diinta ee jaamacadda ama dugsiga fiqiga deeq waxbarasho.
Waxaan horeyba BA uga qaatay Daraasaadka Diinta ee jaamacadda Nigeria.
Joses Adai-Kumi wuxuu leeyahay,
September 1, 2021 at 2: 23 pm
Waa hadafkayga iyo riyadayda inaan noqdo adeegayaal sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa tan macluumaadka.
Caawintaada ku aaddan helitaanka gelitaanka arday caalami ah ayaa noqon doonta mid wax tar leh.
David wuxuu leeyahay,
June 13, 2021 at 3: 29 pm
Bog aad u macluumaad badan.
Waxaan rajeynayaa inaan caawiyo agoonteyda agoonta ah inuu ku biiro
Kulliyadda fiqiga maaddaama uu aad ugu wanaagsan yahay arrimaha Masiixiyiinta, si fiican ayuu u muuqdaa
kaniisaddiisa gurigiisa runtiina wax fiican ayuu samaynayaa xitaa isaga oo aan lahayn tababar badan
June 14, 2021 at 9: am 07